ကလေးတွေကို ပညာပေးဖို့ ကလေးတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ Website တွေကို လူကြီးတွေလည်း သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေ ပညာရေးနှင့် အသိဉာဏ် ဖွံ့ဖြိုးစေချင်ရင် သူတို့လေးတွေကို ဒီ Website တွေကို ရင်းနှီးစေသင့်ပါတယ်။
1. Curious World (https://www.curiousworld. com/#!/)
Curious World ဆိုတာ KG အဆင့်လောက် ကလေးတွေအတွက် အထူး အစီအစဉ်တွေ လုပ်ပေးထားတဲ့ Website ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေကို သင်္ချာနဲ့ စာဖတ်စွမ်းရည် တိုးတက်အောင် ပျိုးထောင်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တိုးတက်အောင်လည်း လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေရဲ့ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားအလိုက် လေ့လာနိုင်တဲ့ အဆင့်တွေ ခွဲခြားပေးထားတယ်။
2. PBS Kids (http://pbskids.org/)
ကလေးတွေကို အွန်လိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးအောင် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ Website ဖြစ်ပါတယ်။ Peg+Cat ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေးနဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ရနိုင်တယ်။ ဂိမ်းတွေကိုလည်း အသက်အရွယ်အလိုက် ရွေးချယ် ကစားခိုင်းလို့ ရတယ်။ ဖတ်စရာ မှတ်စရာတွေကိုလည်း စာကြည့်တိုက် တစ်ခုအသွင် အသုံးပြုနိုင်အောင် ထည့်ပေးထားတယ်။
3. National Geography Kids(http://kids.nationalgeographic.com/)
ကိုယ့်ကလေးက ပင်ဂွင်း ငှက်ပေါက်လေးတွေကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲလို့ မေးလာခဲ့ရင် အဖြေ ခက်နေပါသလား။ ဒီ Website မှာ ကလေးတွေ စောင့်ကြည့်ပြီး သဘောကျစေနိုင်မယ့် ဗီဒီယို အစီအစဉ်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အဲဒီ ကလေး အစီအစဉ်တွေကနေ သိချင်တာတွေကို ဖြေပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းတွေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်း၊ သဘာဝအကြောင်း၊ ကမ္ဘာအကြောင်း ကလေးတွေကို အများကြီး ပြောခိုင်းလို့ ရတယ်။ မသိသေးတာ အတော်များများကို အဲဒီအထဲ ရောက်ရင် ရှင်းပြနိုင်လိမ့်မယ်။
4. ABCmouse.com (https://www.abcmouse.com/)
အသက် ၂ နှစ်ကနေ ၇ နှစ်အထိ ကလေးတွေ လေ့လာဖို့ အကောင်းဆုံး Website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို လေ့လာချင်သလား၊ ဖတ်ပြစေချင်သလား၊ နားထောင်စေချင်သလား၊ သီချင်းတွေ နားထောင်ဖို့နဲ့ ဂိမ်းတွေ ကစားဖို့ ပညာရှင်ကြီးတွေ ပြုစုပေးထားတဲ့ အကောင်းဆုံး Website တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက် သင်ယူလေ့လာမှု ဘယ်လောက်အဆင့်ကို ရောက်နေပြီလဲ ဆိုတာကို မိဘတွေက ပြန်ပြီးတော့ စစ်ဆေးနိုင်တယ်။ တစ်လ အလကား သုံးပြီးရင် တစ်လကို ၇ ဒသမ ၉၅ ဒေါ်လာပေးမှ ဆက်သုံးလို့ရတယ်။
5. Funbrain (http://www.funbrain.com/)
မူကြိုအရွယ် ကလေးတွေအတွက် လေ့လာဖို့ အကောင်းဆုံး Website ဖြစ်ပါတယ်။ Grade 8 အဆင့် အထိကို လေ့လာစရာတွေ စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သင်္ချာ၊ စာဖတ်၊ စာရေး စတဲ့ အရေး အဖတ်အတွက် သုံးမျိုးကို အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ Website တစ်ခုဖြစ်တယ်။ Math Baseball နဲ့ Grammer Gorillas ဆိုတဲ့ ဂိမ်းတွေကတော့ ကလေးတွေ သဘောကျမှာ ကျိန်းသေတယ်။
6. Babytv.com (https://www.babytv.com/)
၂၄ နာရီစလုံး တီဗီ ပရိုဂရမ်တွေကို လွှင့်တင်ပေးထားတယ်။ ပညာရေး အစီအစဉ်တွေပါသလို ကလေးတွေကို ဂိမ်းတွေ ကစားခိုင်းထားတဲ့ အစီအစဉ်တွေလည်း ရှိတယ်။ သီချင်းတွေ နားထောင်ချင်တဲ့ ကလေးတွေလည်း သဘောကျလိမ့်မယ်။
7. Agnitus.com (http://www.agnitus.com/)
ကလေးတွေကို သူတို့နဲ့ မရင်းနှီး အကျွမ်းမဝင်သေးတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေအကြောင်း ရှင်းပြပေးတယ်။ ကလေးတွေဟာ ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ အခေါ်အဝေါ်၊ အသံထွက်တွေကို လက်လေးနဲ့ ထိလိုက်တာနဲ့ ဖော်ပြပေးတယ်။ သင်ယူဖို့ အကောင်းဆုံး Website ဖြစ်ပါတယ်။
8. FarFaria (https://www.farfaria.com/)
ကလေးတွေကို ပုံပြင်ပြောပြဖို့ ပျင်းနေတဲ့ မိဘတွေအတွက် တက်ဘလက်လေး တစ်လုံးလောက်ရှိရင် အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ ကလေးတွေ အနား ချထားပေးလိုက်ရုံနဲ့ သူတို့ နားထောင်ချင်တဲ့ ပုံပြင်လေးတွေ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
9. BrainPOP (https://www.brainpop.com/)
အရုပ်ကလေးတွေကို အထူး ပြုလုပ်ထားတဲ့ Animation တွေက အိမ်မှာသာမက ကျောင်းတွေမှာပါ အသုံးဝင် ထိရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ၊ စတော့ဈေးကွက်အကြောင်း အခြေခံတွေကို ပုံလေးတွေ Animation တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရှင်းပြလိမ့်မယ်။
10. Spatulatta (http://www.spatulatta. com/)
မီးဖိုချောင်ထဲက ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ အခေါ်အဝေါ် အသုံးအစွဲတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကလေးတွေကို မီးဖိုချောင် အကြောင်းအပြင် ချက်ပြုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နည်း တွေကိုပါ စနစ်တကျ သင်ကြားပေးပါလိမ့်မယ်။ အိမ်တွင်းမှု အကြောင်း သိစေချင်ရင် ကလေးတွေကို အခြေခံကစပြီး သင်ပေးနိုင်ပါတယ်။